Moat: Linganisa ukuThathelwa kwabaThengi kuwo onke amajelo, izixhobo kunye namaqonga | Martech Zone
Ukuqhutywa ngu-Oracle luluhlu olubanzi lokuhlalutya kunye neqonga lokulinganisa elinika iseti yezisombululo ekuqinisekiseni intengiso, i-analytics yoqwalaselo, ukufikelela kwiqonga elinqamlezileyo kunye nokuhamba rhoqo, iziphumo ze-ROI, kunye nentengiso kunye nengqondo yentengiso. Inkqubo yabo yemilinganiselo ibandakanya isisombululo sokuqinisekisa intengiso, ingqalelo, ukhuseleko lwebrand, ukusebenza kweentengiso, kunye nokufikelela kwiqonga elinqamlezileyo kunye nobuninzi.
Ukusebenza nabapapashi, iimveliso, iiarhente, kunye namaqonga, uMoat unceda ukufikelela kubathengi abanokubakho, ukuthatha ingqalelo yabathengi, kunye nokulinganisa iziphumo zokuvula amandla eshishini. Ukuqhutywa lilifu ledatha yeOracle ikuxhobisa ukuba ukwazi ukufikelela kwiziphumo ezingcono zeshishini.
Jonga umbono omanyeneyo wamajelo eendaba
Chonga ukusebenza kwephulo lakho
Qonda ukuba yeyiphi imithombo yeendaba eqhuba okona kubandakanyeka
Fumanisa ubuchule bokutsala umdla wabaphulaphuli
Funda ukuba zeziphi iifomathi ezisebenza kakuhle kwishishini lakho, usebenzisa iibenchmark zeshishini
Qinisekisa ukuba ufikelela kubaphulaphuli abafanelekileyo kwisantya esifanelekileyo
Omnye weyona mingeni mikhulu kwintengiso kukuchonga inkunkuma, ukusukela kwiintengiso ezisiwa kubaphulaphuli ekujoliswe kubo okanye kwiintengiso ezibetha abaphulaphuli abafanayo amaxesha amaninzi.
Uhlalutyo lweMoat iqhuba iziphumo ezingcono zeshishini ngokuqinisekiswa ngokuchanekileyo kunye nomlinganiso wokuqwalaselwa oqinisa isicwangciso sakho seendaba sedijithali.
Ukufikelela kweMoat Ukudibanisa ukufikelela kwinqanaba labaphulaphuli kunye nobuninzi bokufumana umbono weqonga lomnqamlezo wokuba ufikelela kubani kwiintengiso zakho kwaye phi.
Isiphumo seMoats ibonelela ngombono wexesha lokwenyani kwintsebenzo yentengiso ukuze wenze izigqibo ezifanelekileyo, ezinolwazi malunga nenkcitho yakho yentengiso.
Imoat Pro sisixhobo sobukrelekrele esibonelela ngenkangeleko yangaphakathi kuthengiso oluthe ngqo kunye nolucwangcisiweyo oluthengayo kwiimveliso. Ngolwazi oluqala kwiminyaka emithathu ukuza kuthi ga ngoku kwintengiso, unokukhangela, uthelekise, kunye nokulandela umkhankaso ngokuhamba kwexesha ukuqonda ukuba isicwangciso sakho siqokelela njani kwabo sikhuphisana nabo.
Kwi-2017, i-Oracle yongeze iMoat kwisuti yayo enamandla kwisisombululo setekhnoloji yentengiso. I-Oracle ibonelela ngedatha kunye netekhnoloji yokuqonda kunye nokufikelela kubaphulaphuli bakho ngcono, yenze nzulu ukubandakanyeka kwakho, kwaye ulinganise konke ngeMoat.
Fumana iDemo yeDemo
Malunga neNtengiso yeOracle
Intengiso ye-Oracle inceda abathengisi basebenzise idatha ukubamba ingqalelo yabathengi kunye nokuqhuba iziphumo. Isetyenziswe ngabathengisi abangama-199 abangama-200 be-AdAge abangama-100, abaphulaphuli bethu, Umxholo kunye nezisombululo zemilinganiselo zandiswa kuwo onke amaqonga amajelo eendaba kunye nomkhondo wehlabathi ngaphezulu kwamazwe ayi-XNUMX. Sinika abathengisi idatha kunye nezixhobo ezifunekayo kuwo onke amabakala ohambo lokuthengisa, ukusukela ekucwangcisweni kwabaphulaphuli ukuya kwibhidi yokhuseleko lwentengiso, ukubaluleka komxholo, ukuqinisekiswa kokubonakala, ukhuseleko lobuqhetseba, kunye nemilinganiselo ye-ROI. Intengiso ye-Oracle idibanisa itekhnoloji ekhokelayo kunye netalente yokufunyanwa kwe-Oracle yeAddThis, BlueKai, Crosswise, Datalogix, Grapeshot, neMoat.
I-Oracle inikeza ii-suites zezicelo ezihlanganisiweyo kunye neziseko ezikhuselekileyo, ezizimeleyo kwilifu le-Oracle.
tags: intengiso yobukrelekrelechitha intengisoukuchitha ukuqinisekiswaUkuqinisekisa intengisoyongezaukhuseleko lophawuUhlalutyo lweqongaUkuhamba rhoqo kweqongaukufikelela kwiplatifomuShishiniUhlalutyo lweshishiniukulinganisa inkcitho yentengisoumjeloUhlalutyo lwemoatiziphumo zomjelomoat promoat ukufikelelaomnichannelOracleIdatha yedatha ye-OracleIntengiso kumabonakude
Uhlobo lwefomathi: Guqula ukuqokelelwa kweDatha kumava oLuntu